KMMR sy ny Legal Team : Tsy hihemotra manoloana ny “ramatahora” -
AccueilRaharaham-pirenenaKMMR sy ny Legal Team : Tsy hihemotra manoloana ny “ramatahora”
29/12/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Manomboka sahady ny fampihorohoroana sy ny fanaovana “ramatahora” na dia mbola ilay vokam-pifidianana feno hosoka sy halatra ary tsy ara-dalàna no navoakan’ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), ny 27 desambra teo.
Toa vao mainka nampidingin-drambo ny praiminisitra Ntsay Christian sy ny mpikambana eo anivon’ny governemanta sasantsasany ny famoahana iny vokam-pifidianan’ny fihodinana faharoa tamin’ny fifidianana Filoham-pirenena iny.
Vantany vao nivoaka mantsy ny vokam-pifidianana teny amin’ny Ceni, nanao fanambarana avy hatrany ny praiminisitra Ntsay Christian fa mampitandrina ireo izay manao fihetsiketsehina.
Araka ny efa fantatra, miantso ny vahoaka izay mahatsiaro fa voahodikodina ny safidiny ary koa voahitsakitsaka ny zony ny avy amin’ny mpomba ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, amin’ny alalan’ny Komity mpanohana (KMMR) sy ny Legal Team, izay misahana ny sampana lalàna eo anivon’ny K25, anio 29 desambra etsy amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna. Noho izany indrindra, nanambara ny avy amin’ ny Legal Team sy ny KMMR fa tsy hihemotra ary mitaona ny vahoaka hanohitra ny halatra sy ny hosoka ary ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka Notsindrian’izy ireo anefa tsy fanakorontanana velively ny hetsika fa fanehoana ny tsy fankatoavana iny voka-pifidianan’ny Ceni iny ary koa mampahafantatra ny vahoaka ny fisian’ilay halatra sy hosoka mihoa-pampana nandritra ny fihodinana faharoa. Tsy vitan’izay, fa mandritra izany koa no hampahafantarana ny besinimaro ny fitanilanana sy ny fampandresena kandidà tamin’ny alalan’ny firaisana tsikombakomba nataon’ny teo anivon’ny Ceni…
Manoloana izany, milaza ny tsy handefitra ary handray fepetra hentitra ny praiminisitra Ntsay Christian, izay avy amin’i Andry Rajoelina sy ny Mapar. Nambarany tamin’izany fa rehefa tsy nahazoana alalana ny hetsika dia tsy azo tanterahina, eny fa na nahazo alalana avy tamin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra aza ny KMMR sy ny Legal Team.
Izany dia midika fa tsy manan-tsaina afa-tsy ny hampiasa ny fahefany amina heri-pamoretana ity lehiben’ny governemanta ity ary manaiky miray tsikombakomba amin-dry Andry Rajoelina amin’ny fangalarana faobe. Manitsakitsaka ny safidim-bahoaka rahateo ihany koa ny praiminisitra satria manaiky izay baikon’ingahy Andry Rajoelina sy ny Mapar. Araka izany, ity lehiben’ny governemanta ity mihitsy no nampanjaka ny hala-bato sy ny hosoka tamin’iny fifidianana Filoham-pirenena iny satria dia ny fikarakarana ny fifidianana no tena antom-pisian’izy ireo sy ny anjara andraikiny ary ny iraka ampanaovina azy ireo eo amin’ny Fanjakana.